स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थपियो, के तिर्ला त ४ अर्ब ८१ करोड ? - Technology Khabar
» ताजा समाचार » स्मार्ट टेलिकमको बाँकी बक्यौता तिर्ने अवधि असार मसान्तसम्म थपियो, के तिर्ला त ४ अर्ब ८१ करोड ?
सरकारले स्मार्ट टेलिकमलाई पुनः बाँकी बक्यौता तिर्ने म्याद थप गरिदिएको छ । गत आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको म्याद थप गर्दै असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता रकम तिरे हुने सुबिधा दिएको हो।
म्याद थप गरिएको अवधिमा कम्पनीले ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम थप गर्न भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएसँगै सो कम्पनीको म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा आफूले म्याद थप भएसँगै १० करोड रुपैयाँ तिर्ने र बाँकी रकम असार मसान्तसम्म तिर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
जसअनुसार अब कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ हाराहारी सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि प्राधिकरणले संसदको अर्थसमितिको २०७५ माघको निर्देशनमा आधारित हुँदै खारेज गरेको स्मार्टलाई सरकारले ब्यूँताएको थियो भने फागुन मसान्तसम्म अन्तिम अवधि दिएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले फागुनभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न नत्र सो कम्पनीलाई अधिनमा लिन भन्नै प्राधिकरणलाई कानूनी प्रकृया शुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर अब भने सो समय बढेर चालु आवको अन्तिम पुगेको छ । सो अवधिमा पनि स्मार्ट टेलिकमले रकम तिरेन भने के हुने भन्ने विषय भने अझै अनिश्चित नै छ ।